Somaliland: Shirkadda TELESOM Oo Aqbashay Go’aamadii Xukuumadda Ee Lagu Xaddidayey Isticmaalka Adeegyada ZAAD iyo E-Dahab - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Shirkadda TELESOM Oo Aqbashay Go’aamadii Xukuumadda Ee Lagu Xaddidayey Isticmaalka Adeegyada...
Xukuumadda Somaliland iyo Shirkadda Isgaadhsiinta Telesom, ayaa Heshiis ka gaadhay khilaaf ka taagnaa Isticmaalka Adeegga lacagta la isugu diro ee ZAAD, kaasi oo Xukuumaddu ka soo saartay Go’aan ah in aan lagu diri karin wax ka yar boqol dollar.
Kulan Caawa Madaxtooyada Somaliland ku dhex maray Madaxweynaha, Masuuliyiinta Xukuumadda ee qaabilsan la dagaalanka Sicir-bararka Dollarka iyo Madaxda Shirkadda TELESOM, ayaa Shirkadda Telesom ku aqbashay inay u hoggaansanto Go’aanka Xukuumaddu soo saartay ee ah inaan Adeegga ZAAD lagu diri karin wax ka yar boqol dollar.
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo Madaxda Shirkadda TELESOM Cabdikariin Maxamed Iid oo markii kulankaasi dhamaaday si wada jir ah Saxaafadda ula hadlay, ayaa faahfaahiyey waxyaabaha la isku afgartay.
Wasiirka Madaxtooyada oo hadalka ku horeeyay, ayaa yidh, “Madaxda Shirkadda Telesom waxaanu isla garanay Madaxda TELESOM laba Qodob oo kala ah, in Go’aamadii Xukuumadda la fuliyo, Shirkadda Telesom-na way ogolaatay inay fuliso, waxaanu garwaaqsannay in 48-kii Saacadood ee aanu u qabanay inay farsamo ahaan ku yar-tahay inay System-kaa beddelaan. Waxaanu isla qaadanay inaanu qabano Guddi farsamo oo nagala talisa Annaga Xukuumad ahaan xilliga ugu habboon ee Systemka (Adeegga ZAAD) laga saarayo wixii boqolka Dollar ka yar.”
Waxa kale oo uu Wasiirku sheegay in Shirkadda Dahabshiil Group soo gaadhsiiyey Warqad ay ku aqbalayaan Go’aammada Xukuumadda ee lagu xaddidayo Isticmaalka Adeegyada ZAAD iyo E-Dahab.
Madaxa Shirkadda TELESOM Cabdikariin Maxamed Iid oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa yidhi, “Waxaanu isla qaadanay in Shirkad ahaan aanu u hoggaansannahay Go’aanka Golaha Wasiirradu soo saareen, ee Madaxweynuhuna Guddoomiyey.”
Madaxda Telesom wuxuu sheegay in Dawladdu ka aqbashay inay wakhtiga ay u baahan yihiin inay wax kaga beddalaan Nidaamka uu adeegga ZAAD u shaqeeyo, si looga saaro in lagu diro wixii ka yar boqol dollar.